Afghanistana: Kabul Bank Eo Am-pahafatesana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Oktobra 2017 3:46 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, বাংলা, македонски, English
Tsy rendrarendra manokana ho an'ny firenena manankarena ny krizy ara-bola. Ny tantaran'ny Kabul Bank any Afganistana dia fahaverezam-bola ho an'ny mahantra. Eo am-pahafatesana, manana trosa 1 miliara ny banky, izay an'ny rahalahin'i Hamid Karzai, filohan'i Afghan. Olona an'arivony no afaka naka vola maherin'ny 200 tapitrisa dolara tamin'ny herinandro lasa, fa ny hafa kosa tsy navelan'ireo mpiambina mitam-piadiana niditra tao amin'ny banky.
Nanoratra i Paiman Majedi, bilaogera Afgana ao Afghanistan fa samy mpiara miombon'antoka goavana ao amin'ny banky ny rahalahin'ny Filoha Karzai, Mahmoud Karzai sy ny filoha lefitra Afghan, Hussein Fahim.
Mahmoud Hakimi, bilaogera sady mpanao gazety Afghana nanoratra tao amin'ny bilaoginy, Tabarghanak [fa]: